साँढे | मझेरी डट कम
kbs — Fri, 08/01/2008 - 22:45
महादेवको विशेष वाहनमा नियुक्त भएकोले साँढेको चुरीफुरी निश्चय नै कुनै मन्त्रीको पीएको भन्दा कम छैन। मन्त्रीज्यूको आदेश खोज्नेले पीएलाई सिझाउनुपर्छे भन्ने पद्धतिको श्रीगणेश नै हिन्दूहरुले साँढेबाट गरेका छन्। त्यसैले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभन्दा पहिले उनको अगाडि लँगौटीसमेत नलगाएर गजधम्म बसेको लबस्तरो साँढेलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुपर्छ। बाली फाँडोस् कि मान्छेलाई हानोस् उसलाई लट्ठी देखाउनु महापाप ठानिन्छ। जिमीदारले जतिसुकै अत्याचार र व्यभिचार गरे पनि नेपाली किसानले ठूलाबडासित जोरी खोज्नु हुन्न भनी सहनुपरेझैं हिन्दूहरुले साँढेको अत्याचार सहँदै आएका छन्। साँढेको सिङमा हाम्रो इहलोकको भाग्य निर्भर गर्छ भने साँढेको पुच्छर परलोकको निम्ति वैतरणीको झोलुङ्गे पुल हुन्छ रे! वृषोत्सर्ग हिन्दूको तर्ने उत्सव, गाईपुत्रले आजीवन छाडा हुने अधिकार पाउँछ - साँढा भएर खाने बिर्ता पाउँछ। उब्जाउने र कमाउने झन्झट साँढेलाई पर्दैन। तर अपशोच के भने साँढे हुने सौभाग्य दुई-चार भाग्यमानीले मात्र पाउँछन्, बहुसंख्यक गाईपुत्रहरुको निम्ति त बालकैमा भेसेक्टोमी गरेर मुखमा पेरुङगो लगाई काँधमा जुवा बोक्नु सिवाय अर्को बाटो रहँदैन। त्यसैले साँढे सामन्त हुन्छ, गोरु सर्वहारा। साँढे गोरा झैं रजाइँ गर्छ, गोरु निग्रा झैं कजिन्छ; साँढे शक्तिपूर्ण स्वतन्त्र र स्वच्छन्द नेता वर्गमा पुग्छ गोरु लुरेलाम्रे जनता!
साँढेको आफ्नो खुबी फुँकारर मात्र हो हुन त, जेजति अहङ्कार उसमा चढ्छ त्यो त्रिशुलको प्रतापको फल हो। यसो भनेर साँढेको सम्पूर्ण प्रसिद्धि महादेवको वाहन हुनाले मात्र भएको भन्नुचाहिं गाईको बेइज्जत गर्नु हो। उच्च ओहदामा पुग्ने श्रीमतीका श्रीमानले'चिन्नुभएन? म फलानीकी श्रीमान हुँ' भनी फुलेर परिचय दिएझैं साँढे पनि जुरो नचाउँदै गर्व गर्छ- 'म गौमाताको पतिदेव हुँ।' मास्टरकी श्रीमतीलाई वर्णमाला नखारीकनै मास्टर्नी मान दिएझैं दिने हो भने साँढे पदेन हाम्रो गौपिता हो। पतिको अस्तित्वबिना पत्नीको अस्तित्व आधा हुने हाम्रो संस्कार अनुरुप गाईलाई मान्दा साँढेलाई नमान्नु आधा गाईको पूजा गर्नुजस्तै हो। तर यस तथ्यलाई कत्ति ध्यान नदिई हामी गाईतिहार मान्छौं, साँढेतिहार मान्दैनौं, गाईजात्रा गर्छौं, साँढेजात्रा गर्दैनौं। यो हेर्दा आफैंले सम्मान गरेको साँढेको आफैंले अपमान गर्न खोजेजस्तो लाग्छ। गाईतिहार, गोरुतिहार मानी साँढेतिहार नमान्नु जनाना र नामर्दको अगाडि पुरुषको उपेक्षा गर्नु होइन र?
तर होइन, छोरीले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट 'ज्वाइँ न स्वाइँ अगुल्टाले च्वाइँ' भनेझैं गाईमैयाँले छाडिदिनासाथ राँको बालेर साँढे लखेट्ने चलन पनि यहाँ देखिएको छ। हाम्रो संस्कारमा जेसुकै होस्, व्यवहारमा गाईको निम्ति 'उक्तदान' बाहेक साँढेको अरु योगदान
Bhairab Aryal is one of the
अतिथि — Wed, 01/20/2010 - 05:04
Bhairab Aryal is one of the awesome writer. Its typical sattire to the things happening around us. I love his writings since i read his "Jaya BHudi" when i was on grade Nine. He is writing style is much different from other common piece of writing!